काभ्रेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रति जनप्रतिनिधिको आकर्षण बढ्दो, को कोले गरे सनाखत ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रति जनप्रतिनिधिको आकर्षण बढ्दो, को कोले गरे सनाखत ?
काभ्रेमा एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा सनाखत गरेका छन् । आजसम्म ५३ जनाले सनाखत गरिसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत उमेश कुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सनाखत गरेका छन् । नगरप्रमुख टोक बहादुर वाईबाको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आज सनाखत गरेका हुन् । नगरप्रमुख वाईबा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काभ्रे जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार आज मात्रै ४४ जनाले नेकपा एस पार्टीमा सनाखत गरेका हुन् । हिजो ९ जनाले सनाखत गरेका थिए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी तामाङ र भुम्लु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले पनि आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गर्नुभएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाबाट वडा सदस्य र भुम्लु गाउँपालिका दुई जना वडाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिले पनि सनाखत गरेका छन् । तर निर्वाचन कार्यालयले नाम भने सबैको गोप्य राखेको छ ।
बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा सचितानन्द केसी र अन्य २ जना वडा सदस्य, पनौती नगरपालिकाबाट जिल्ला समन्वय समितिका एक जना सदस्य र वडा नम्बर १२ का तीन जना वडा सदस्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन् ।
त्यस्तै महाभारत गाउँपालिकामा एमालेले जितेको एउटैमात्र वडा थियो । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सहित ४ जना सदस्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन् । त्यसैगरि पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष वडा नम्बर १ का दुई जना वडा सदस्य र वडा नम्बर २ का एक जना वडा सदस्यले सनाखत गरेका छन् ।
तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का एक जना वडा सदस्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन् ।
यो संख्या अझै बढ्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष टोक बहादुर वाईबाले बताउनुभयो । ‘भोली अन्तिम दिन हो । आज केहि साथीहरू गएर निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गर्नुभयो । भोलिसम्म अझ यो संख्या बढ्छ, अध्यक्ष वाईबाले भन्नुभयो ।’
धुलिखेल नगरपालिकाको तीज विशेष कार्यक्रम: सांसद देखि मेयरसम्म नाचे छमछमी
धुलिखेलको थिङ गाउँमा 'एक घर, एक धारा'